Ebe a na-achọ ezumike na “ezi ndụ” (II) | Akụkọ Njem
Ọ bụrụ na ụnyaahụ anyị nyere gị ya a ederede Site na ebe ntụrụndụ 5 na ụlọ oriri na nkwari akụ dị iche iche iji gaa zuru ike n'ahụ gị na uche gị, taa, anyị na-ewetara gị ise ọzọ n'otu isiokwu ahụ. Ka ị ghara ịkwụsị ịchọ ọ bụghị nanị ịnụ ụtọ oge ezumike na oge ezumike gị kamakwa izu ike nke ọma iji laghachi n'ọrụ na usoro ị na-eme kwa ụbọchị na ume na batrị ebubo.
N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga otu n'ime ebe ndị a, mejupụta ụlọ akụ ahụ n'ihi na ha adịghị ọnụ ala.
1 Isi ahụ, na Santa Lucia
2 Ebe ezumike FlorBlanca, na Costa Rica
3 Welllọ Ọgwụ Sha Wellness, na Albir, Alicante (Spain)
4 Ogologo Ahụike Spa, Portugal
5 Ti Sana Detox Retreat & Spa, na Italytali
Isi ahụ, na Santa Lucia
Ebe obibi a dị n'akụkụ osimiri, na mgbakwunye na ịnye mmiri nnu mmiri, o nwere nnukwu ogige, ọdọ mmiri 3, ọdọ mmiri ọkụ, ọgwụgwọ spa kwa ụbọchị na echiche mara mma banyere Oke Osimiri Caribbean.
Ya ụlọ mma na a dịkọrọ ndụ na nke oge a, bụ saa mbara, nwere a mbara ihu na ubi ma ọ bụ echiche osimiriHa nwere igwe ikuku, friji, ụlọ ịsa ahụ dị mma na nkeonwe.
Ebumnuche nke ụlọ nkwari akụ a bụ ịkwalite òtù nzuzo nke ahụ iji nweta ọdịmma dị elu. Iji mezuo nke a, ha nwere ọtụtụ ọrụ dịka Shiatsu, Tai Chi, ahụike, Pilates ma ọ bụ yoga, ma na klas ma nkeonwe.
Ihe ọdịmma a dịkwa mma ụlọ mmanya piano, mgbatị ahụ, ogige tennis 2, ọbá akwụkwọ, a Club House, Wellness center, skin clinic na mmiri sports dị ka ndakpu mmiri.
Ka i si hụ, a pụtara zuru ezu mgbagwoju onye ego gburugburu 1200 euro kwa abalị maka mmadụ abụọ ...
Ebe ezumike FlorBlanca, na Costa Rica
FlorBlanca Resort bụ okomoko mgbagwoju dị na oke osimiri pacific. Ebe ezumike a nwere ezigbo gastronomy (nri ọhụrụ, ahụike na mpaghara dị ụtọ), yana ọtụtụ ọrụ dịka Farisii, hiking, inyinya ma ọ bụ njem nlegharị anya, maka ndị ọzọ na-akpali akpali.
Ọ bụrụ na-amasị gị ime jụụ, ị kwesịrị ịmara na ha duziri usoro Yoga na Pilates. yana inye ọgwụgwọ na izu ike na ọgwụgwọ ọhụrụ na nnukwu Bambú Spa.
Su ego gburugburu 400 euro kwa abalị maka abuo.
Welllọ Ọgwụ Sha Wellness, na Albir, Alicante (Spain)
N'ikpeazụ, anyị ruru n'ókèala mba, na-ekwusi ike na mgbagwoju anya a maara Welllọ Ọgwụ Sha Wellness. Ọ dị na mpaghara Albir, Alicante ma ọ dị na mpaghara Nkeji 20 site n'ụsọ osimiri.
Ọ na-enye ọdọ mmiri ime ụlọ na n'èzí, ọtụtụ ọgwụgwọ na akụrụngwa dị iche iche, yana oke ụlọ ọgbara ọhụrụ na ọmarịcha nwere usoro dị mma ma dịkwa mma. The Sha Wellness enweghị ihe na-erughị 80 dị iche iche ụlọ maka mgbochi ịka nká, slimming, mma na ọcha ọgwụgwọ. Na mgbakwunye, ọ na-agwakọta ụzọ izu ike ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ.
Ebe a na-elekọta ọ bụghị naanị maka ọdịmma na ahụike yana kamakwa ịma mma gị.
El ego Kwa abalị gburugburu 700 euro ihe ruru mmadụ abụọ.
Ogologo Ahụike Spa, Portugal
Spa a na-enye ihe aha ya na-egosi: Na mgbakwunye na izu ike na izu ike, ọ na-achọ ahụ ike na ahụike Ogologo oge maka ndị ọbịa gị, na gburugburu ebe obibi mara mma, osimiri.
Otu n'ime ntọala nke 'Ogologo Ndụ Medical Spa' idu ke debugging. Emere mmemme ya iji mee ka ahụ gị dị ọcha, mee ka ihe nchebe nke usoro ahụ gị na ike gị dịkwuo mkpa, na-ahọrọ otu n'ime atụmatụ atọ detoxification ya na atụmatụ nri gụnyere. Na Ngwa ngwa ngwa na-enye usoro ọgwụgwọ dị ọcha na nke spa maka ime ka ọ dị ọhụrụ. Họrọ nri nri mkpocha ọgwụ ma ọ bụ ihe ọ juiceụ quickụ ngwa ngwa na Ọcha nhicha.
Ọ bụrụ na ahụ gị dị mkpa ka ọ dị ọcha, dị ka nwata ma were gị ụgwọ ike, a na-atụ aro nhọrọ a nke ukwuu.
Ti Sana Detox Retreat & Spa, na Italytali
Ezumike na-agbake na okomoko nke ọma nke Sana, n’ebe ugwu nke ugwu ndị dị n’etiti Italiantali. Etiti a jikọtara Oriri na-edozi ahụ ya na ọgwụgwọ mmega ahụ y ọgwụgwọ ndi mmadu. Ha ga-eme ọmụmụ ihe na nyocha nke onwe iji nwee ike ịhọrọ otu n'ime ụzọ atọ. Naghachi na nlekọta nke Italiantali na-adịghị ize ndụ, tụsara ahụ ọgwụgwọ spa ahaziri iche, yana mụta klaasị isi nri.
Ebe a nwere ihe dị iche karịa ndị ọzọ na ị ga-anọrịrị ma ọ dịkarịa ala 3 ehihie na abalị, karịa ihe ọ bụla iji nweta ọgwụgwọ ha kwadoro.
Kedu ihe ị chere banyere ebe ezumike ndị a na mmemme? Think chere na ọ bara uru ịkwụ ntakịrị maka itinyekwu oge na ha ma ọ bụ hụ na ha dị oke ọnụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ebe a na-achọ ezumike na “ezi ndụ” (II)